Maxay yihiin qaar ka mid ah jimicsiyada ololka mataanaha ee hadda uun kulmay? - Mytika Speak
Bogga ugu weyn / Olol Mataano & Jacayl Rabaani ah / Maxay yihiin qaar ka mid ah jimicsiyada ololka mataanaha ee hadda uun kulmay?
Waxaa jira layliyo badan oo ah dabka twin midba midka kale ka yeelo si aad isu dheelitirto oo aad u wada korto. Waxyaabaha gaarka ah ee laylisyadan ayaa la siin karaa ka dib markay midoobaan. Talooyinka soo socdaa waxay noqon karaan bar bilow wanaagsan.
Ka hadal Xuduudaha
Abuur xuduudaha oo aad leedihiin layliyo xuduudeed oo aad si daacad ah ugu wada sheekaysan kartaan kana wada hadli kartaan waxaad ka doonaysaan cilaaqaadka. Midkood waxaa laga yaabaa inuu xiiseeyo xiriir jaceyl halka kan kalena laga yaabo inuu xiiseeyo xiriirka platoniga. In kasta oo arrimuhu had iyo jeer is beddeli karaan, waa fikrad fiican in goor hore la dejiyo rajooyin si loo hubiyo in labadooduba isku bog yihiin. Marka la midoobo, waxay noqon kartaa wax aad u fudud in lagu kala boodo midba midka kale noloshiisa isla markaana aad isla markiiba isku waasho midba midka kale. Dejinta soohdimaha waxay noqon kartaa tallaabo weyn oo loo qaado hab isku dheelitiran.
Kala hadal Aragtida
Ka hadal waxyaalaha nolosha ee aad xoogga ku dareento. Tan waxaa ka mid noqon kara siyaasad ama diin ama wax uun. Isku soo xoori halkaas marka aad eegto cidda aad tahay iyo waxa aad doonayso inaad ku beddesho wixii aad ku adkaysato. Runtii isdhageysta oo fahan xaqiiqda ah in dadku leeyihiin aragtiyo kaladuwan kuna saleysan nolosha shaqsiyan ay ku noolaayeen. Ha isku dayin inaad midba midka kale beddesho laakiin wada hadal ku saabsan meesha aad ka caawin karto kan kale inuu fahmo sababta aad u dareemayso sidaad wax u jeceshahay, adigoo isku dayaya inaad fahamto.
Dad Ka Wada Hadal
Ka hadal dadka noloshaada ugu muhiimsan. Samee jaranjarooyin badan go aanna ka gaarto cida aad dhigeyso tier kasta. Tusaale ahaan, waxaad ku dari kartaa qoyskaaga Tier 1 haddii ay yihiin dadka adiga kuugu muhiimsan. Waxaad dooran kartaa inaad saaxiibbadaada dhigto Tier 2 iyo deriskaaga oo ah Tier 3. Ma jirto hab sax ah oo lagu sameeyo tan oo ah mid guud u ah qof walba. Furaha ayaa ah go'aaminta cidda mudnaanta leh. Haddii laba qof ay kuu soo wacaan gargaar, yaad caawin lahayd haddaad mid keliya caawin lahayd? Qofkaasi waa inuu ku jiraa Tier dhow (tusaale Tier 1) oo kan kale laga yaabo inuu ku jiro Tier ka hooseeya (tusaale Tier 2). Layligani wuxuu caawin karaa mid kasta shaqsi ahaan laakiin wuxuu kaloo ka caawin karaa mataankooda inay fahmaan doorka shaqsiyaadka shaqsiyeed ay ka ciyaaraan noloshooda.
Ka hadal dhacdooyinka waaweyn ee nolosha kugu soo maray. Falanqaynta qaarkood waxaad u maleyneysaa inaad dhacdooyinkaaga isku midoobaan. Tani waxay ku dhici kartaa siyaabo isku mid ah ama ka soo horjeed ah. Tusaale ahaan, markii mid jiran yahay, waxaa suuragal ah inay si mucjiso ah u bogsadeen halka midka kalena jiran yahay. Bedel ahaan, labaduba waxay u wada nusqaadeen isla waqtigaas. Tani waa tusaale mataano mataano ah oo si miyir qab ah u raadinaya kan kale iyagoo isku badalaya ama isku dheelitiraya tamarta naftooda. Iskuday inaad isbarbar dhigto waqtiyada dhacdooyinkan lagana yaabo inaad korortid faham aad u qoto dheer oo ku saabsan sababta ay wax udhaceen oo aad u aragto sida aad had iyo jeer isu ilaalin jirteen ruux ahaan. Mataano ayaa si miyir la’aan ah u qaabeeya nolosha midba midka kale markaa isku day inaad ogaato sida mataanahaagu ugu jeclaan lahaa nolosha aad ku noolayd. Tusaale ahaan, haddii noloshaadu xasilloon tahay oo aad jeceshahay tacabir, mataanahaaga waxaa laga yaabaa inay soo mareen nolol aad u xiiso badan iyo degganaansho xasiloon. Isku day inaad ka fogaato inaad ku murugooto mataanahaaga. Labadiinaba waxaad abuurteen kan kale noloshiisa oo ku saleysan waxa aad naftaada u dooneysay sidaas darteed go'aanka waxaa laga gaaray goob jacayl. Horay u socoshada, waxaad sifiican isku fahmi doontaan baahiyaha midba midka kale.
Inta aad jimicsiyadaan sameyneyso, daacad noqo. Sheeg sida aad dhab ahaan u dareemeyso wax walba. Haddii aad rabto inaad dareento jacayl rabbaani ah iyo xorriyadda la timaadda aqbalaadda 100%, waxaad u baahan tahay inaad furfurnaato 100%. Isku day inaad xasuusato inaad naftaada la hadlayso markaad lahadlayso markaa xitaa cilladaha aad isku aragtay waa in si daacad ah loogala hadlaa. Intaad dhageysaneysid, aqbal oo ha ku xukumin wax kastoo ay dareemaan. Mid kasta xukun inaad midda kale qabato waxay ubaahantahay inaad waxkaqabato oo aad waxkaqabato ama waxaad kubixineysaa inaad kubixiso noloshaada. Markuu qof yiraahdo "weligood" wax ma qaban doonaan, caalamka waxay u aragtaa tan codsi ah a casharka maxaa yeelay waxay caalamka u sheegayaan inaysan wax fahmayn. Sidan oo kale, koonku wuxuu abuuraa xaalado uu qofku ku kasbado fahamkaas. Ugu dambeyntiina, waxaad u baahan tahay faham buuxa si aad ugu noqoto midnimada. Fikradaha oo dhami way ku wada-jiraan midnimo laakiin xukun kasta waa is-faham la’aan ka dhalata kala-qaybsanaan; keenista laba-geesoodka iyo ka-hortagga midaynta.
markii ugu horeysay.
indhahayga oo xidhaysa.
Ruuxu way midoobaan,
jacaylka rabaani ah wuu duuli karaa
banaanka soo dhig cillad kasta.
Hal hab oo loo fikiro,
ma tilmaamayo sharciyada.
hawlgal isku dhafan.
Wadajir u shaqeynta,
wadaagida hal aragti.
Tagsmiyirka koritaanka shakhsi ahaaneed gabayo casharo ruuxi ah ruux ahaaneed Labaatan Guul
Sidee dheelitirka tamarta u saameyn ku leeyahay waalidnimada?